Disemba 2020 - I-SunTrust Blog
Inyanga: December 2020
Ukubuyiselwa kwemali yentela kusacutshungulwa? Okufanele Ukwazi
By I-Christian TMLT December 15, 2020 Ezezimali 0 Amazwana
Ukubuyiselwa Kwentela Kusacutshungulwa: Kungazwakala njengobudala kulabo abadinga kakhulu ukubuyiselwa kwemali yentela ngaphambi kokuba bathole imali. Kwabambalwa abangenanhlanhla, ukulinda kuthathe izinyanga. Ngomnqamulajuqu wokufaka nokukhokha intela ka-2019 enwetshiwe ...
Ungayidlala Kanjani Imidlalo ye-PS2 ku-PC yakho noma kwi-Mac Nge-Emulator
By ULucas TMLT December 14, 2020 Buyekeza, Ubuchwepheshe 0 Amazwana
Ungayidlala Kanjani Imidlalo ye-PS2 ku-PC yakho noma kwi-Mac Nge-Emulator. bfcbcbcv sdfss ...
Ungalinganisa kanjani ibhethri le-iPhone ngezinyathelo ezi-8 ezilula
By ULucas TMLT December 14, 2020 Ubuchwepheshe 0 Amazwana
Ungalinganisa kanjani ibhethri le-iPhone ngezinyathelo ezilula eziyi-8. Ungalinganisa kanjani ibhethri le-iPhone ngezinyathelo ezilula eziyisishiyagalombili: Izici ezibonakalayo zamabhethri e-lithium-ion zidinga ukusetshenziswa njalo ukugcina ukusebenza okuphezulu. Ngalesi sizathu, i-Apple incoma ukukhipha nokufaka kabusha ...
Ungazikopisha kanjani izithombe zakho ze-copyright nokuthi kungani kufanele
Ungazibophezela Kanjani ku-copyright Izithombe Zakho nokuthi Kungani Kufanele. Ungazikopisha kanjani izithombe zakho ze-copyright nokuthi kungani kufanele: Ezweni lanamuhla ledijithali, sekubaluleke kakhulu ukubhalisa ilungelo lobunikazi lezithombe zakho. Yingakho sihlanganise le copyright elula ...
Izinyathelo Ezilula Zokuvula Amafayela we-JAR ku-Windows 10
By ULucas TMLT December 14, 2020 Ubuchwepheshe, Ukukhangisa 0 Amazwana
Izinyathelo Ezilula Zokuthi Uwavula Kanjani Amafayela we-JAR ku-Windows 10. Vula Amafayela we-JAR ku-Windows 10: Kufanele ukuthi uhlangane namafayela we-JAR ngesikhathi esithile ngenkathi uvula i-Inthanethi futhi kumele ngabe wazibuza ngakho, ukuthi kuyini ...
Ikhamera ye-iPhone ayisebenzi? Izinkinga Ezijwayelekile eziyi-7 nokuthi Ungazilungisa Kanjani
Ikhamera ye-iPhone ayisebenzi? Izinkinga Ezijwayelekile eziyi-7 nokuthi Ungazilungisa Kanjani. Ikhamera ye-iPhone ayisebenzi? Kuvame ukubonwa ukuthi esikhundleni sokunikeza umbono wangaphambili noma ngemuva ngokucacile, ikhamera ayisebenzi kahle futhi ikhombisa isikrini esimnyama ....
Yini i-RFID-blocking Wallet? futhi Yini Okufanele Uyithenge?
Yini i-RFID-blocking Wallet? futhi Yini Okufanele Uyithenge? Yini i-RFID-blocking Wallet? Eminyakeni embalwa edlule, sekuvele imboni yonke evimba i-RFID, futhi isinda ngokwengxenye ekudidekeni.Njengoba ubuchwepheshe buqhubeka nokuthuthuka, ingxoxo ezungeze idatha ...
Izinyathelo Ezilula Zokuthi Ungazilungisa Kanjani Izinkinga Zemodi Yokulala
Izinyathelo Ezilula Zokuthi Ungazilungisa Kanjani Izinkinga Zemodi Yokulala. Lungisa Windows 10 Izinkinga Zemodi Yokulala: Lapho uhlelo lungena esimweni samandla aphansi, luzihambela ngokuzenzekelayo ngaphansi kwesigaba seModi Yokulala. Noma, kwesinye isikhathi sisebenzisa lesi sici ngamabomu ...
Ungazilanda Kanjani Izincwadi Ezipholile Ezincwadini Ze-Google
Ungazilanda Kanjani Izincwadi Ezipholile Kusuka ku-Google Books. Landa Izincwadi Ezipholile Ezivela Ezincwadini Ze-Google: Iwebhusayithi ye-Google Play ikunikeza ukufinyelela okusheshayo ezinkulungwaneni zezincwadi ezifaka ibhizinisi, uhlelo lwekhompyutha, nezincwadi zezimali ngefomethi ye-eBook. FUNDA OKWENGEZIWE: Okuhamba phambili ...
Izindlela ezi-7 ezihamba phambili zeWindows File Explorer Nezinye izindlela
Izindlela ezi-7 ezihamba phambili zeWindows File Explorer Nezinye izindlela. Izindlela ezihamba phambili zeWindows File Explorer: Iningi labasebenzisi beWindows PC bakhetha ukusebenzisa umhloli wefayela ozenzakalelayo. Kepha uma unesithukuthezi sokuyisebenzisa kwiWindows PC futhi wake wacabanga ukuzama ...